Ntuziaka #Hashtag | Martech Zone
Friday, April 5, 2013 Tọzdee, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
Anyị edeela banyere mkpa iji ya eme ihe hashtags mgbe ị na-eji Twitter, ma obu usoro nke gbasasiri site na nyiwe ndi ozo. Karịsịa, Youtube, Instagram na Google+ agbakwunyere nkwado… na Facebook n'akụkụ akuku! N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, hashtags bụ ụzọ dị mfe iji gosipụta mkpụrụokwu, ahịrịokwu ma ọ bụ isiokwu dị n’ime ederede gị.
Na-echekarị onye jiri hashtag mbụ? Nwere ike ịkele Chris Messina na 2007 na Twitter!
kedu ka ọ dị gị maka iji # (paụnd) maka otu. Dị ka na #bọdụ [msg]?
Site na izipu ederede gị na akara paụnd, ị na-eme ka ọdịnaya dị mfe ịchọ na ịchọta. Maka ndị na-ere ahịa, ọ bụ atụmatụ achọrọ - ọtụtụ ndị ọkachamara na-achọ saịtị ndị a na ịchọ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-ere! Enwekwara ụfọdụ kediegwu Ngwaọrụ dị maka nyocha hashtag!
Tags: chris mesinahashtags facebookakpa hashtaggoogle gbakwunye hashtagshashtaghashtag nyochahavehtagsTwitterHashtag twitterHashtag youtube
Qvidian: Gini bu akwukwo egwu ahia?
Nchedo Email na Ojiji n’uwa niile
Apr 19, 2013 na 2: 50 AM
Echere m na ị jiri akara ngosi ICQ maka ntinye IRC. Odoghi anya na nke a bu na ebumnuche mana o ghagbagha m obere na mbu. Ewezuga nke ahụ ọ mara mma ịgụ. Dịkarịa ala otu ugboro…. 😉 Daalụ maka ịkekọrịta agbanyeghị Douglas!